Statistics: Uto nke Social Media Customer Service | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 27, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
May nwere ike na-agụbeghị m ahụmịhe ndị ahịa na Waze na Twitter mgbe m kọọrọ m ahụhụ. Nzaghachi ahụ masịrị m nke ukwuu. Ọfọn, abụghị m naanị otu ndị ahịa na-atụgharị na mgbasa ozi mmekọrịta na-atụ anya mkpebi maka nsogbu ndị ahịa ha. Offọdụ ndị ahịa m enweghị oke ọ happyụ mgbe m gwara ha etu esi azaghachi ndị ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta, mana ọ bụ nzukọ ọha na eze na ohere pụrụ iche maka ụlọ ọrụ gị ịchapụta.
Nkwado ndị ahịa dị mma na usoro mgbasa ozi ọha na eze kwesịrị ịdị maka azụmaahịa. Ihe omuma ihe omuma a gosiputara mkpa na ntaneti mgbasa ozi nke ndi mmadu nwere ike itinye na ahia obula.
N’ezie, 1 n’ime mmadụ iri na anọ ndị na-eji ọrụ mgbasa ozi mere mkpesa site na mgbasa ozi, na 4% na-atụ anya enyemaka. Ndị mmadụ na-ahọrọ mgbasa ozi mmekọrịta maka nlekọta ndị ahịa karịa nkata, email, ma ọ bụ ekwentị!. Ihe omuma a, Rrị elu nke Nlekọta Ndị Ahịa Social Media, na-akọwa atụmanya ndị ahụ, ọnọdụ ha, na otu ụdị ndị ọ dị mkpa isi meghachi omume.
Aga m akwado ige ntị na nke anyị Podcast na mgbasa ozi ọha na eze nke Dell otu mụta otu esi eme ya nke ọma. Dell nwere otu ndị ọrụ ha niile nwere inye nkwado site na mgbasa ozi mmekọrịta. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ime mkpesa na onye ọrụ ọ bụla, ha ga-ebutekwa ndị ọrụ ahịa ndị ahịa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, otu ndị ahọpụtara nwere ọkwa nkwado na nnwere onwe iji dozie ọnọdụ ndị ahụ iji hụ na ndị ahịa na-enwe ọ happyụ.
Kedu ihe bụ nsogbu nke Ahụmịhe Ndị Ahịa Ọjọọ na Social Media?
Oge nzaghachi na-adịghị mma nwere ike iduga na 15% mmụba na ọnye ndị ahịa
30% nke ndị mmadụ ga-aga onye asọmpi ma ọ bụrụ na ịzaghị site na mgbasa ozi mmekọrịta
Answeringza azịza mkpesa na-ebelata nkwado ndị ahịa dịka ihe dị ka 50%
31% nke ndị mmadụ na-eziga ntanetị mgbe ha nwere ahụmịhe nlekọta nlekọta ndị ahịa
Nlekọta ndị ahịa kachasị mma na-akpata 81% mmụba kwa afọ na-enweta ego site na ndị ahịa na-ezigara ya na Nlaghachi na Investment bụ 30.7%!
Kedu ihe bụ ROI nke Social Media Customer Service?
Ndị ụlọ ọrụ nwere nlekọta mmekọrịta ndị ahịa kachasị mma 92% na-ejide njide ndị ahịa
Otu ụgbọ elu na-aza Tweet kwesịrị $ 8.98 (ma ọ bụ 3%) mmụba na ego ha nwetara n'otu azụmahịa
A telco na-azaghachi Tweet kwesịrị $ 8.35 (ma ọ bụ 10%) mmụba na ego ha nwetara na azụmahịa ọ bụla
Ngwongwo Pizza na-azaghachi Tweet bara uru $ 2.84 (ma ọ bụ 20%) mmụba na ego ha na enweta
Nke a bụ nkọwa info zuru ezu site na Weebụsaịtị:
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịalaghachi azụmaahịaInye ego kwa tweetROIelekọta mmadụ mediaọrụ ndị ahịa soshal midiaTwitter
Ọkt 30, 2017 na 9:13 AM
Iji usoro mgbasa ozi na-arụ ọrụ nke ọma maka ọrụ ndị ahịa nwekwara ike inye aka kpuchie nzukọ ahụ site na mmemme ndị ọzọ na-emebi. Were ikpe nke Bright House site na ụdịdị dị iche iche. Ha jisiri ike jigide nzaghachi dị elu n'oge mgbanwe ahụ, nke doro anya na ndị ahịa ha nwere ekele maka ya.